Oge: Isi mmalite Izipu ozi |zọ Ebumnuche | Site na Linux
N'ihi na otutu na ugboro ugboro ozi ọma banyere WhatsApp mara ma ọ bụ puru omume ọma, otu n'ime ngwa ngwa izi ozi kachasị eji eme ihe n'ụwa, site na ndị mmadụ na otu, ọtụtụ akwagala n'otu oge ma ọ bụ kpamkpam, ogologo oge gaa ngwa ndị ọzọ akwadoro dị ka telegram y signal.
En Ndokwa, anyị anaghị ekwu maka ya WhatsApp, ebe ọ bụ Ọ bụghị Free ma ọ bụ Open Source Software. Anyị n'ozuzu na-eme nke a iji zoo aka na nke gị nsogbu ma ọ bụ iji ya na-atụnyere ndị ọzọ, karịsịa free na-emeghe ngwọta. Dịka ugbu a, anyị ga-ekwu maka ya nnọkọ, nke a na-akwalite dị ka a emeghe iyi nchebe ozi ngwa.
Mụ onwe m akwụsịla iji ya WhatsApp Kpamkpam dị ka nke ọnwa a nke February 2020, ebe ọ bụ na anaghị m eji ya, n'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-eri ọtụtụ data na ohere diski, n'etiti ihe ndị ọzọ na-adịghị mma. Ana m eji ọgwụ ike maka afọ 3 telegram na ugbu a dị nnọọ ka nkwukọrịta ikpo okwu na / ma ọ bụ mobile na desktọọpụ ozi ngwa.
1 Belata ma ọ bụ zere iji WhatsApp
2.1 Kedu ihe ọ bụ?
2.2 Isi atụmatụ
Belata ma ọ bụ zere iji WhatsApp
Ma, karịa ihe ndị ahụ, ezigbo nchegbu ma ọ bụ ihe kpatara ya, nke ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ òtù dị iche iche gosipụtara n'ụwa niile, ga-enwerịrị n'uche. Ọmụmaatụ, gbasara WhatsApp, akụkọ na-ekwenye ekwenye esitela n'otu ụlọ ọrụ dịka:
"Ọrụ ndị Europe agwala ndị ọrụ ya ka ha bido iji Signal, ngwa izipu ozi ngwụcha ruo na njedebe, na mbọ ịbawanye nchekwa nke nkwukọrịta ha. Ntụziaka ahụ pụtara na mbadamba ozi dị na mbido ọnwa Febụwarị, na-agwa ndị ọrụ na "A họrọla Signal dị ka ngwa akwadoro maka izi ozi ọha na eze ozugbo." Ndị na-ahụ maka ihe nzuzo na-akwado ngwa ahụ n'ihi njedebe ngwụcha na njedebe na teknụzụ isi mmalite.". Mgbasa ndọrọ ndọrọ ọchịchị - 23/02/2020
"Nationstù Mba Ndị Dị n'Otu ha agwala ndị isi ha ka ha ghara iji WhatsApp kwurịta okwu. Mgbe a jụrụ ya onye odeakwụkwọ ukwu UN bụ Antonio Guterres na onye isi ala Saudi ma ọ bụ onye ndu ọ bụla ọzọ na-eji WhatsApp, onye ọnụ na-ekwuru UN Farhan Haq kwuru na Tọzdee: Ndị isi UN nwere natara ntuziaka ka ị ghara iji WhatsApp, anaghị akwado ya dịka usoro echedoro". Reuters Nkezi - 23/01/2020
Na maka ọtụtụ ebumnuche, ozi, ebumnuche ma ọ bụ akụkọ dịka ị dị, ugbu a bụ ọhụụ ngwa ngwa na-eme ka ụzọ ya site na ọha na eze, karịsịa ndị hụrụ Free Software na Open Source, oku nnọkọ.
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, kpọmkwem na ya "White Akwụkwọ" (Whitepapers):
Na mgbakwunye, ọ bụ ngwa nke Companylọ ọrụ Loki, nzukọ kere iji mepụta ngwaahịa sọftụwia gbadoro anya na nchekwa na nzuzo nke ndị ọrụ ya.
Ọ bụ mmepe mmepe.
Nabata izipu ozi olu na mgbakwunye na ọtụtụ ụdị.
Ọ na-eji izo ya ezo si na njedebe na-ewepu nchịkọta nke metadata dị nro.
Ọ na-enye ohere nkata site na otu ndị ruru mmadụ 10 ma ọ bụ ndị otu na-enweghị njedebe.
Ọ naghị edekọ metadata, ebe ọ na-adịghị echekwa, egwu ma ọ bụ ndekọ metadata maka ozi.
Emere ya nke ọma iji nye ọkwa nzuzo na nnwere onwe dị elu karị, n'agbanyeghị ụdị nlele ugbu a.
Ọ nwere mmekọrịta ọtụtụ ngwaọrụ, ya bụ, ọ na-eji NJ oge maka ekwentị onye ọrụ na kọmputa.
Ọ na-arụ ọrụ na ịmepụta akaụntụ niile na-enweghị aha, yabụ, enweghị nọmba ekwentị ma ọ bụ email dị mkpa iji mepụta NJ nnọkọ.
Banyere anyị GNU / Linux Sistemụ arụmọrụ, nnọkọ na-enye ihe echichi faịlụ na usoro AppImage ihe dị ka 125 MB, nke nwere ugbu a nkwụsi ike mbipute 1.0.2. Ihe kpatara nke, nwụnye ahụ ga-adị oke mfe ma ọ ga-adaba na ọtụtụ nkesa anyị ugbu a. N'ihi na android, Oge - Ozo onwe, dị na ụdị 10.0.3, na nke nke 20 MB ma nke ahụ chọrọ ụdị nke gam akporo 5.0 ma ọ bụ karịa.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere «Session», ezigbo ihe eji emeghe ngwa ngwa ozi ederede, nke nwere njirimara dị mkpa ma yie ngwa ngwa ozi ndị ọzọ a ma ama, nwere nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Oge: Isi mmalite Izipu ozi Seczọ Ebumnuche
akụkọ mebere dijo
Ebe ọ bụ na e mepụtara smartphones ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ka a ghara ịchọta ya, ma ugbu a, ọ bụ naanị na Facebook (WhatsApp, Messenger, IG, wdg) anyị na-emepụta nnukwu data.
Ekele, VirtualReport. Daalụ maka okwu gị. Ekwenyere m kpamkpam.
Ga-amasị m iso nke a ozi ọwa na-emelitere na ozi ọma ebe ọ bụ na m na-ahụ software na-akpali….
Ọ dị ka ihe na-adọrọ mmasị, agbanyeghị na ihe m chọrọ ịmara mgbe niile bụ etu esi edere ngwa ahụ na GNU / Linux, n'ihi na ha nọ na Electron (ngwanrọ ngwanrọ) na kọmputa ochie na-ewe ọtụtụ afọ ịmalite ya. Ọ ga-adị mma ịmara ma ọ bụrụ na njikọta na-aga n'ihu na ekwentị dị mkpa dị ka mgbaàmà, nke bụ ihe na-enweghị isi na echiche m.
M bụ naanị ọchịchọ ịmata na m na-aga na-agbalị ya heh heh. Banyere.
Daalụ, Bebel. Ọ ga-aba uru ịmara nke ahụ, mana na Whitepaper ya ma ọ bụ na ngalaba FAQ ya ọ na-egosi ma ejiri elektrọnik mee ya ma ọ bụ na ọ bụghị n'ụzọ doro anya ma ọ bụ n'ụzọ doro anya. Banyere nke ọzọ, echere m na site na iji mmekọrịta ọtụtụ ngwaọrụ na site na iji akaụntụ na-enweghị aha na-adabereghị na nọmba ekwentị, ebe ọ bụ na enweghị njikọ na-aga n'ihu na ekwentị. Mana ị ga-anwale nke ọma iji hụ ka o si arụ ọrụ.
You hụla ikikere nrụnye rịọrọ na gam akporo? kpam kpam chịrị.
The Protonmail na-arụ ọrụ na ngwa izipu ozi, nke ahụ ga-abụ ezigbo 😉
Ọ ga-amasị m ịnwale ya
Zaghachi Jose Marin
Microsoft kwupụtara ọkwa niile nke Azure Sphere